सुनील शर्माले दुई सयभन्दा बढीलाई पार्टीमा प्रवेश गराए - Koshi Online
सुनील शर्माले दुई सयभन्दा बढीलाई पार्टीमा प्रवेश गराए
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उमेदवार डा. सुनील शर्माको मोरङ क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत पर्ने पथरी–शनिश्चरे नगरपालिका–१० मा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी आएका २ सय ४ जना स्थानीयलाई नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गराएका छन् ।
पथरी–शनिश्चरेस्थित जिरिखिम्तीमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच उनीहरु पार्टी प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरुलाई मोरङ क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार सुनी लशर्मा र प्रदेशसभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार सूयर्माराज राईले पार्टी प्रवेश गराएका थिए ।